Ma ogtahay qolooyinka dab damiska wadanka Mareykanka in sanadkiiba ay u dhaqaaqaan ilaa iyo 355,400 guri oo uu dab ka kacey sanadadii 2012 ilaa iyo 2016. War bixintaan waxay ku tuseysaa in dabku galaafto nolosha ilaa iyo 2.560 qof iyo dhaawac dhan 11,670 sanadkiiba, waxuuna keenaa qasaara maaleed oo dhan $6.5 billion dollar.
Dadka inoo warama ee Afrikanka ah waxay inoo sheegeen in ay ubaahanyihiin wacyigilin kusaabsan guriyaha ay ku noolyihiin. Wadamada Africa guryaha waxay ka sameysanyihiin bulkeeti laga sameeyey dhooqo, taasoo aan saameyn badan kasoo gaarin dabka. Marka aan usoo kacno guryaha Maine waxay kasameysanyihiin geedo ama alwaax kaasoo aad u qabsada dabka. Africa wax dab damis ah maba jiraanba inta badan. Dadyowga Afrikaan ah waa ay layaabaan markaay arkaan qolyaha deb damiska iyo sida ay u badbaadin karaan kacaey. Dadka qaar ayaa inoo sheegey in ay ka argagaxeen marka ay maqleen dhawaaqa dab damiska iyo nalka sida aadka u nuuraaya. Waxay moodeen in lasoo weeraray dariskooda waayo guri dab qabsada way ku yartaha Africa taasoo ka dhigeyssa in dadka wax badan arkin baabuurta dab damkis.
Dadyowga waxay inoo sheegeen in ay jiraan laba nooc oo soo galootiga Afrikanka ah. Qaar ka imaadeen magaalooyin iyo qaar ka imaadeen tuulooyin. Dadyowga ka imaadeen magaaalooyinka way garanaayaan nooca guryaha kuyaala halkaan korontooda, biyahooda. Laakiin dadyowga ka imaadey tuulooyinka iyo baadiyaha way ku adagtahay in ay laqabsadaan noocyadaan guryaha ah waayoo waxay wax ku karsadaan jiko banana kutaala ama mid ka goan guriga waxay shitaan dhuxul, Khoryo, ama gas lagu shubo burjiko. Aqoon uma laha jiko guriga dhaxdiisa kujirta. Dadyowgaas waxaa ku cusub guryo noocaan ah waa in ay laqabsadaan.
Dadka aan lahadalney waxay inoo sheegeen in ay jirto baahi loo qaba siminaar kusaabsan sidii loola qabsan lahaa nolosha guryaha isla markii Maine lasoo degaba gaar ahaan sidii looga nabad gali lahaa guryaha cusub. Saacadaan la taaganyahay wax kasta waxaa lagu bartaa tijaabo taasoo khatarteeda leh markay imaato koronto iyo dab. Siminaarka loo baahanyahay waxaa kamid ah isticmaalka dabka si taxadar leh, sidii loo siticmaali lahaay waxyaabaha lagu xariiriyo korontada, dab sheeguhu waxa uu yahay iyo wixii la sameynaayo haduu dhawaaqo, waxa la sameynaayo haduu dhaca dab, sidii loo isticmaali lahaay mashinka dab damiska ah. Waxaasoo dhan waxay ku qoronyihiin Ingris waana ku adagtahay in ay gartaan dadyowga ku cusub Mareykanka. Dadyowga cusub waxay ku andacoodeen in Kambani yaahsha iska maleeyaan in dadkoo dhan ingris ku hadlaan ooyna qkhriyaan.
Taas waxaa u dheer, dadka cusub waxay u baahanyihiin siminaar si ay u keydiyaan dabka, sidii ay ula tacaali lahaayeen qashinka guriga yaala.raashiinka kii nafaqa leh iyo wixii aan ka digtoonaan laheen iyo badbaadada jididka. Mararka qaar waxaa kuugu adkaataa in aad garanwaysa wax yaabaha guriga kujira, tusaala ahaan heer kulka looga baahanyahay in lageeyo qaboojiyaha raashinka, taasoo dadka kunool gobolka Maine ay iska caadeystaan.
Waxaa nalagu maneystey nolosheyna iyo guryaheena, ma awoodno in aan dhumino. Guriga waa hoyga nolosheyna gaar ah, waana meesha aan ku nagaano in badan waqtigeena. Guriga waa meesha aan ku keedeysano xasuusteena iyo wax yaabaha raasumaalka ah. Waa meesha aan kaga gabaadno qawowga iyo waxyaabaha kala oo khatar ah oo banaanka nooga imaada. Waa meesha aan usoo jiif tagno habeenkii markaan soo dhameysano shaqo maalimeedkeyna.
Dhamaantaayna waan jacelnahay inaan nabad gelyo ku joogno guryahayna, taas waxay u fiicantahay qoysaskeyna iyo dadka xaafada degan. Waan aan ku dadaalnaa sidii aan isu caawin laheen si xaafadaheena ay ku badbaadi lahaayeen. Ma awoodno in aan iska dhigno in qof kasto uu amaan yahay ayagoo kujiraan guryo kasameysan alwaax, kaasoo jikada iyo korontadaba ay gudaha ugu jiraan guriga. Waxaa lagama maarmaan ah in loo baahayahay in lis ku war giliyo arimaha dabka.
NextMashruuc magiciisa la dhoho Baskiilo loogutalagalay dhamaan dadka Maine degan ayaa bilaabayana xiliga 2019